Amanqaku emfazwe asimahla ePUBG 2019 | I-pubg bp
Ikhaya / Blog / Amanqaku emfazwe e-PUBG yasimahla i2019
Ngaba ujonge indlela elula yokulawula PUBG umdlalo? Ewe, sifumene i-PUBG code generator enokuthi ikwenze iqhinga kuwe ngaphandle kokubiza iindleko.
phambi kokuba we Sungula yonke inkcazo malunga nale jenri efunyenwe kakuhle, masikubonise ukuba uyisebenzisa njani xa udlala i-PUBG kwivenkile yeapp ukuze ufumane ii-Battlepoints (BP) ezingenamkhawulo kunye nempilo.
Ungayifumana njani indawo yamaSimahla kunye neLungelo leMfazwe (iBP)
Inyathelo 1: Cofa kwindawo ethi "Yenza '.
Inyathelo 2: Uya kucelwa ukuba ufake igama lomsebenzisi okanye idilesi ye-imeyile enxulumene ne-akhawunti ye-PUBG.
Inyathelo 3: Ngenisa inani lamanqaku owafunayo.
Inyathelo 4: Cofa kwiqhosha lokungenisa kwaye ulinde imizuzu embalwa.
Inkqubo iya kunxibelelana neseva ye-PUBG ukukukhuphela i-Battlepoints (BP) yasimahla kunye nempilo. Ngamaxesha athile, unokucelwa ukuba uqinisekise ukuba ungumntu okanye awungomntu. Njengoko unokuba sele uqagele ngoku, eli nyathelo elongezelelweyo liyafuneka ukukhusela i-bots ekusebenziseni kakubi le (PUBG) Indawo yeMidlalo yeMfazwe engaziwayo umvelisi. Unokucelwa ukuba ugcwalise uphando olufutshane ngaphambi kokuba ufumane iikhredithi kwiakhawunti yakho. Khumbula ukuba awuzukubonelela ngolwazi lwakho lwangasese okanye lwezezimali ngalo naliphi na ixesha lelinye ixesha lokugcwalisa uphando.
I-PUBG (i-Player Unkssaziwayo i-Battlegrounds) ngumdlalo apho bonke abadlali kufuneka babulale abanye ngezixhobo, izithuthi, kunye nezinye izixhobo abaya kuzifumana ngexesha lomdlalo ukuze baphumelele. Ngokusisiseko, amakhulu wabadlali bawela kwisiqithi. Kwikhulu labadlali, oyena mntu usindayo de kube sekupheleni uyaphuma njengophumelele umdlalo. Ezi mfuno zilandelayo kufuneka zihlangane ukuze udlale umdlalo.
Unxibelelwano lwe-Intanethi olusebenzayo
-Ixabiso elingaphezulu kweshumi elinesithandathu
Ungawudlala umdlalo simahla kwaye uvele njengophumeleleyo. Kodwa emva koko, amathuba akho ophumelele ngaphandle kokuchitha nayiphi na imali kwiimpawu zepremiyamu ngokuqinisekileyo zibuhlungu. Abadlali abahlawulwayo baya kuba nakho ukufikelela izixhobo ezingcono kunye neemoto, eziya kuthi zibanike inzuzo eyongezelelweyo ngaphezulu kwamalungu asimahla. Ke, amathuba akho okubulawa ngabantu ngexesha lokudlala makhulu aphakamileyo. Ukuhlala kumdlalo ixesha elide kwaye uphume njengophumeleleyo, Umdlali ongaziwayo weendawo zemfazwe ziya kuba luncedo olukhulu. I I-PUBG BP Umvelisi kwingxoxo yeyona nto ilungileyo ngaphandle apho unokufumana malunga nexesha langoku kunye nexesha. Iya kukuvumela ukuba uphange ngokulula kwaye uphephe abanye abadlali ukuba baphile ixesha elide kumdlalo kunesiqhelo, kukuvumela ukuba ufumane amanqaku angaphezulu kwe-BP, amanqaku e-XP, imbuyekezo kunye neekreyiti zokuphanga. Ngokusisiseko, umvelisi wePUBG uya kuwaphucula amathuba okuphumelela kumdlalo ngezihlwitha ezininzi.
I-PUBG Points Generator Generator: Iimpawu eziBalulekileyo:
Kuba uyazi ukuba le generator iyasebenza, masikubonise ezinye zeempawu zayo ezibalaseleyo eziyibeka ngaphambili phambili kukhuphiswano lwayo. Ngokukhuthala, xa kuvavanywa, safumanisa le ntloko ikhowudi yekhowudi yePUBG kunye namagxa ngaphezulu kwabanye abavelisi phaya. Nasi isizathu:
-Isixhobo esisekwe kwi-intanethi. Ke, isicelo sakho samaNqaku omdibaniso asimahla siza kusetyenzwa jiffy.
-Umvelisi usebenza kuzo zonke iinkqubo onokuzisebenzisa ukuze udlale i-PUGB njengezixhobo ze-Android, i-IOS, i-iPhone, i-iPad, njl.
-Ukuze le generator isebenze, akukho mfuneko yokuba i-jailbreak isixhobo sakho se-Android.
-Ukusuka kuvavanyo lwethu, sifumanise ukuba I-PUBG Points Generator Generator enye enkulu ixesha elifanelekileyo. Ifumaneka ikakhulu i-24 / 7.
Akuyi kufuneka ufake okanye ukhuphe nantoni na. Kwakhona, le generator yePUBG y umoya onamandla wokuwusebenzisa.
Iqela elisemva kwejenreyitha lihlaziya isixhobo rhoqo. Ke, ngekhe uhlangane nawo nawuphi na umba.
-Baphuhlisi basebenzisa into echasene nokuthintelwa ukunqanda iakhawunti yakho ekubeni ingavalwa, eneneni intle.
Esi sixhobo siyasebenziseka lula njengoko sinokufumana i-PUGB sivelisi sendalo.
-Umveliseli ombuzayo awunantsholongwane, akukho malware, kwaye akukho-bug, konke kwangaxeshanye.
-Kusimahla, kwaye inokusetyenziswa ngabantu bayo nayiphi na iminyaka. Kwakhona, ibonelela ngokufikelela ngokukhawuleza kwiikhredithi ezingenamkhawulo kunye namanqaku afana neshishini lomntu.
Ngubani ofanele ukuba usebenzisa le Generator yePUBG?
Esi sivelisi sinokusetyenziswa kuye nawuphina umntu odiniweyo ngenkqubela-phambili ethe chu kumdlalo. Njengoko usenokuba uyazi, abasebenzisi abadlala mahala banesiphazamiso esahlukileyo kumdlalo ngokuchaseneyo nabo bahlawulayo badlalayo. Abadlali basimahla bahlala bethatha umngcipheko wokufa kumdlalo kungaphelanga nemizuzu yemidlalo yeqonga, eyonakalisa ngokwenene yonke imonwabisa kubo. Ngokwesiqhelo, abafumani zikhali zilungileyo ngexesha ukuze bazigcine zibhabha kumdlalo. Kwelinye icala, abadlali abahlawulelwayo banokwaneleyo kwiakhawunti yabo yokuthenga izinto ezibizayo ezinokubanceda basinde kuyo yonke imiqobo endleleni ngaphandle kwengxabano.
Kulabo badlala umdlalo rhoqo banokuthi bayazi nento yokuba iindawo ezilungileyo ziphangwe ziba semngciphekweni wokungena. Usengozini yokubulawa kwindawo yokuphanga esemgangathweni olungileyo kunye nenani lezixhobo. Ungayichazanga eyokuba abanye abadlali banokuba yimpahla kwindawo enye, ukwenza amathuba akho okufumana izixhobo ezilungileyo ezisemgangathweni ziqaqambe ngokwenene. Kulapho i-generator iza khona ukuhlangula. Ngale jeneretha kwiipokethi zakho zasemva, akuyi kuba nexhala malunga nokuphangwa okuphezulu kuba umvelisi uya kulanda iingqekembe zemali ezingenasiphelo kunye neegrem onokuzisebenzisa ukuthenga izixhobo zokhetho ngaphandle kwengxabano.
Ngokukrakra, i-PUBG generator kumbuzo unokutshintsha indlela odlala ngayo i-PUBG. Ekugqibeleni uya kuba nakho ukufumana isandla esiphezulu kumdlalo ngaphandle kokuchitha imali ekuphuculeni okubizayo. Umvelisi usebenza ngokugqibeleleyo kakuhle ngamaxesha onke. Ke, kufanelekile ukuba uthathe umpu kule jenali yePUBG ngalo naluphi na usuku lweveki. Sele sixoxe ngamanyathelo ekufuneka uwalandele ukuze ufumane imali kunye nemali engenasiphelo, kunye neendlela zemali, eziya kukunceda ukongamela umdlalo ongazange wenziwa ngaphambili ngaphandle kokuphosa ingalo nomlenze. Umvelisi uya kukunceda ufumane ubuninzi bezinto zomdlalo simahla, ezifumaneka ngokucacileyo ngamalungu ahlawulelweyo.
Ngokusisiseko, le generator iya kukunika isibonelelo ngaphezu kwabanye abadlali kunanini na ngaphambili. Ngenxa yokuba i-100% isimahla, i-generator yeyomntu wonke ofuna ukwenza inkqubela phambili kumdlalo ngokukhawuleza kwaye kulula kunesiqhelo. Ewe kunjalo, akufuneki uzibone njengomntu okhohlakeleyo ngokusebenzisa i-generator yoluhlobo. Esi sisixhobo nje esifanelekile ukuba sigqithise kwabo bafana emva kwemali yakho eyenziwe nzima. Sukuyiphosa inyani yokuba le generator iya kukunceda uphumelele umdlalo nokuba ungowokuqala kwesiqalo. Ngokuthetha ngokungagungqiyo, esi sisisombululo ekuphela kwaso esinokukufumanela imali kunye neengqekembe zemali ukonwabela umdlalo ongazange wenzeka ngaphambili. Ke, kutheni ungazami? Iya kukuhlangula kwindawo yokuqala yesiqhelo-ukuphoxeka ukuba uninzi lwabadlali basimahla abadibana nabo.
Isebenza njani i-PUBG Code Generator?
Njengoko kulindeleke, i-generator isebenza ngendlela elumkileyo kakhulu. Inxibelelana neseva yomdlalo kwaye yenza ukuba inkqubo ikholelwe ukuba kukho isicelo secandelo elihlawulweyo. Ngendlela, ihambelana nenkqubo yokuthenga ngaphakathi kohlelo. Ke, iqela lenkxaso alikhe lifumanise ukuba isicelo sivela kwilungu elingabhatalanga. Xa bekhulula izixhobo, zilayishwa ngokukhawuleza kwiakhawunti yakho yokudlala. Kuba isebenza phantse ingafumaneki, iakhawunti yakho iya kuhlala ikhuselekile ngamaxesha onke. Sher, yintoni enye ongayicela kumvelisi wekhowudi yolu hlobo? Le generator ye-PUBG yidayimani ngokwenene.
Ngaba ndingasebenzisa iiJenali zePMB zeBP ezifanayo?
Ngokuqinisekileyo, uya kufumana i-generator ezininzi ezifanayo kwimarike. Kodwa emva koko, uninzi lwazo alufanele ixesha lethu. Ngokuthetha ngokungafihlisiyo, sizame inqwaba yeefomathi ezahlukileyo ngaphambi kokuhlala kule. Ngaba uyakholelwa okanye hayi, uninzi lwabavelisi abafanayo abisebenzi njengoko kubhengeziwe. Ungayichazanga eyokuba banokufumana i-akhawunti yakho ye-PUBG ekudala ivaliwe kunye nokuphakamisa iintsimbi xa kulungiswa isicelo samancedo asimahla. Ukwaqhuba nomngcipheko wokufumana ikhompyuter yakho ukuba yosulelwe yintsholongwane okanye ibugs. Ke ngoko, kucetyiswa ukuba ungasebenzisi nayiphi na i-generator ongazithembi ngokupheleleyo. Ngokukrakra, ungaphulukana ngakumbi nenkqubo. Ukuba ngandlel 'ithile uphethe ukufumana i-generator yePUBG efanayo, okanye ungayinika umpu. Ngokombono wethu wobungcali, kuya kufuneka unamathele kule generator kuba kunzima kakhulu ukufumana i-generator yePUBG ngeli xesha lanamhlanje. Uninzi lwejenreyitha ziphelelwe lixesha ngokuhamba kwexesha. Kwaye, uninzi lwazo lukhona nje ukukuhlazisa wena nabanye. Ke, yiba sisilumko kwaye ungawa lixhoba kwezi scammers ze-Intanethi.
Amagama okugqibela kwi-PUBG Code Generator
Ngokusebenzisa i-PUBG Code Generator, uya kuba nakho ukuvelisa umda we-Battlepoints. Khumbula ukuba le nto ayifuni naluphi na ufakelo okanye imali yokwenza isicelo sakho. Into ekufuneka uyenzile kukukhetha izibonelelo kwaye ulinde i-generator ukuba yenze umsebenzi wayo. Ngokusisiseko, ukusetyenziswa kwesi sixhobo sikhululekile, sikhuselekile kwaye sikhuselekile. Ke, yifumana iiNdawo zakho zokuHlala simahla ukongeza amava akho emidlalo kunangaphambili. Esi sixhobo seKhowudi yePUBG sisixhobo sokuzama i-2019. Sithembe; ngekhe uzisole ngokuzama. Emva kwayo yonke loo nto, i-generator iya kukunceda ube ngowona mdlali wePUBG ungabakho.
Kuhle kakhulu ukuba abantu babelana tutorials enjalo
Yenziwe ngempumelelo i-bp
Kulula ukufumana i-bp ngale 🙂
woooohooo! enkosi ndoda